Rahoviana no manomboka ny tsy fandriampahalemana mandritra ny fitondrana vohoka?
Hatramin'ny fotoana nanaovana sy ny fametrahana ny embryon ao amin'ny vatana dia manomboka ny fanavaozana ny hormona mahery vaika, ny andraikitra hanomanana ny vatana amin'ny fitondrana sy ny fiterahana. Anisan'ireo "fiantraikany" eo amin'ity fanavaozana ity ny toxikosean'ny bevohoka, ny fisehon'ny ankamaroan'izy ireo dia ny tsy fahampian-tsakafo.
Rahoviana no mitranga mandritra ny fitondrana vohoka?
Amin'ny ankapobeny, ny toxikose ao amin'ny vehivavy bevohoka dia mitombo hatramin'ny 6-7 herinandro hatramin'ny andro voalohany amin'ny fotoana farany. Izany dia noho ny amin'izao fotoana izao ao amin'ny vatana izay mihombo ny hormones amin'ny ankapobeny tompon'andraikitra amin'ny fivelaran'ny vohoka. Indraindray anefa dia misy fihinanan-kena eo amin'ny fitondrana vohoka alohan'ny fahatarana. Mety ho vokatry ny valinteny hormonina mahery vaika amin'ny fanombohan'ny drafitra izany. Amin'ny toe-javatra sasany, ny toxikose toy izany dia miharihary kokoa ary sarotra kokoa.
Tsara homarihina fa indraindray ny soritr'aretin'ny toxikose. Ohatra, ny tsy misaina dia tsy amin'ny maraina, fa amin'ny tolakandro na alohan'ny hatoriana. Reny maro no hanamarika io famantarana io, fa aza ampifandraisina amin'ny maha-bevohoka azy, mandra-pahatongan'ny fahatarana. Ny vehivavy sasany dia tsy mahita ny toxikose.
Mazava ho azy, ny toxikosezy amin'ny fiainan'ny vehivavy dia tsy ny fotoana mahafinaritra indrindra, fa satria te hahafantatra izy hoe oviana ny mandalo no handalo mandritra ny fitondrana vohoka. Amin'ny ankapobeny dia tsy maharitra 2-4 herinandro ny toxikozia, ary ny herinandro 12 avy eo dia tsy mitohy intsony. Amin'ny toe-pahasalamana, dia mety haharitra 16 herinandro ny toxikose, saingy tsy dia fahita firy izany, ary ny karazana toxicose toy izany dia raisina an-tànana.
Ahoana no iatrehana ny zava-manahirana?
Ny vehivavy bevohoka rehetra dia mahita ny lalany hiady amin'ny toxikose. Voafoana, sakafo maraina mandry eo am-pandriana, manamaivana ireo zavatra mahasosotra, toy ny fofona manitra, manasa amin'ny rano mangatsiaka. Ny ankamaroan'ireo fomba ireo dia mampihena kely ny fihinanan-kanina, fa ny fotoana ihany no afaka manamaivana tanteraka ny toaka - mila manam-paharetana ianao ary miandry ny faharoa fahatelo.
Ny antony mampalahelo amin'ny maha-bevohoka dia tena voajanahary - miova ny vatana, hormonina vaovao no navotsotra, ny vehivavy dia mifandray amin'ny reny. Izany rehetra izany dia miditra amin'ny soritr'aretina iray manontolo. Manoro hevitra ny psychologists: ny fanesorana toxicose, haingana araka izay azo atao ny manaiky ny toe-piainanao vaovao ary manomboka mifaly amim-pahatsorana amin'ny maha ray aman-dreninao azy. Amin'ity tranga ity dia mihena haingana ny fihenan'ny vehivavy bevohoka.
Meti Prep ho an'ny fiterahana
Ny fihenan'ny trondro madinika mandritra ny fitondrana vohoka
Ny loza ateraky ny fahaterahana vao teraka
Afaka mampitombo ny dite miaraka amin'ny menaka?
Magnesium mandritra ny fitondrana vohoka
Cystic ovarian during pregnancy
Erythrocytes ao anatin'ny urine mandritra ny fitondrana vohoka
Azo atao ve ny misotro mandritra ny fitondrana vohoka?
Cocktails miaraka amin'ny romana
Sakafo vaovao mavo
Nanandrana namitaka an'i Drake tamin'ny tongony "manjombona" ​​i Rihanna
TIFF-2016: Kurt Russell, Kate Hudson sy ireo olo-malaza hafa tamin'ny andro faha-7 amin'ny Festival Festival Toronto
Kaya Scodelario sy Benjamin Walker
Afaka mahazo vohoka ve ny vehivavy bevohoka?
Bibilava amin'ny karaoty - ahoana no hiadiana?
Aiza no misy ny fitiavana?
Ethinyl estradiol - karazana hormon inona izany?
Ny felam-pasika - 7 fomba fijery mahavariana
Ahoana ny fomba hampifandraisana matevina eo amin'ny tendanao?
Vatomamy vita amin'ny serfa amin'ny vato amin'ny ririnina
Kiraro beigey - fironana amin'ny 2017 sy sary lamaody